» नेपाल आईडलमा ‘तोरी लाहुरे’ बनेर किरणले मच्चाए तहल्का
नेपाल आईडलमा ‘तोरी लाहुरे’ बनेर किरणले मच्चाए तहल्का
मकवानपुर, २० माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल आईडल’ सिजन ३ मा चर्चा कमाउन सफल किरण कुमार भुजेलले सफलताको नयाँ मोडहरु पार गरिरहेका छन् । नेपाल आईडलको स्टेजमा भर्सटाईल सिंगरका रुपमा ख्याति कमाएका किरणले शुक्रबार ‘कोकाकोला अफलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड पनि जितेका छन् । अवार्ड जितेसँगै उनले नगद २० हजार रुपैयाँ समेत प्राप्त गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
किरणले शुक्रबार नेपाल आईडलको स्टेजमा तहल्का मच्चाउँदै अवार्ड जितेका हुन् । उनले गोपाल योञ्जनको आवाजमा रहेको ‘तिमी मेरो राधा पियारी’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेर माहोल तताएका थिए । झिल्के गेटअपमा प्रस्तुति दिएका किरणले प्रस्तुति दिँदा दर्शकदिर्घामा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । गायनसँगै अभिनयमा समेत अब्बल देखिएका किरणको आवाज र प्रस्तुति हेरेर तिनै जना निर्णायक र विशेष अतिथि हरकुलस बस्नेतले निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्टेजमा नाच्दै प्रस्तुति दिएका किरणले निर्णायकहरुलाई समेत नचाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा चारै जना निर्णायकहरु स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स दिएका किरणलाई अभिनय समेत राम्रो भएका कारण निर्णायकहरुले उनलाई ‘तोरी लाहुरे’ नाम राखिदिएका छन् । विशेष अतिथि हरकुलस बस्नेत उनको तारिफका लागि स्टेजमै पुगेका थिए । किरणले यसअघिको प्रस्तुतिमा निर्णायक ईन्दिरा जोशीलाई गुलाफको फुल दिएर स्टेजमा रोमान्टिक माहोल सिर्जना गरेका थिए ।
किरणको भोटिङ कोड एनआई ०३ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०३ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।